Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka oo Qaaday Xayiraada Qaxootiga Imaanaya Dalkooda.
Maraykanka oo Qaaday Xayiraada Qaxootiga Imaanaya Dalkooda.
Posted by ONA Admin	/ January 31, 2018
Maraykanka ayaa qaadey qayb ka mid ah sharciga mamnuucidda soogalootiga ee dhaqangalay bishii 10aad ee sanadkii hore 2017. Xayiraaddan ayaa ku saabsanayd muwaadiniinta ka timid kow iyo toban dal.
Sida laga soo xigtay Waaxda Arrimaha Gudaha ee Mareykanka, qaxootiga ka socda kow iyo toban dal oo ku yaala liiska waxaa lagu soo bandhigi doonaa baadhitaan adag oo ka horeysa, waxayna Maraykanka imaan karaan baadhitaan adag kadib.
Sida laga soo xigtay Haweeneyda ah Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Maraykanka Nielsen, shuruudaha soogalootiga ah ayaa adkayn doona dadka aan loo baahnayn in ay isku dayaan in ay ka faa’iidaystaan barnaamijka qaxootiga ee Maraykanka.
Dalalka xayiraada laga qaaday ee la adkeynayo baadhitaanka dadka qaxootiga ah ee ka imaanaya waxaa kamid ah Soomaaliya, Masar, Ciraaq, Iraan, Liibiya, Maali, Kuuriyada Waqooyi, Suudaanta Koonfureed, Sudan, Yeman iyo Siriya.